Publisher – राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र
परिचय The Annual Report of National Tuberculosis Program (2014) shows that the case notification rate (CNR) of all forms of TB has remained stagnant for last 10 years in Nepal even when each layered and analyzed in the regional/ eco-terrain level. So, the Government of Nepal needs to know the reality of TB prevalence in…
यदि तपाईं घरमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ संक्रामक हुनुहुन्छ भने, तपाईं नजिकका अरूलाई सुरक्षित राख्न निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको औषधिको रूपमा निर्देशित गर्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ! खाँसी, स्नज, वा हँसिलो हुँदा सधैं आफ्नो मुख ऊतक राख्नुहोस्। बाँधिएको थलोमा राख्नुहोस् र यसलाई सफापूर्वक फ्याँनुहोस्। आफैलाई आफैबाट अलग पार्नुहोस् र कसैको साथ नजिकको सम्पर्कबाट…
Total Hits : 1716689